China Cast Iron Olympic 2-Inch Weight Plate na-emepụta na ndị na-eweta ya Meiao
The Barbell Olympic 2 "Cast Iron Weight Plates bụ akụrụngwa ọzụzụ ibu ibu azụmaahịa.
A na -ere ngwaahịa azụmahịa Barbell gburugburu ụwa n'ime ụlọ akwụkwọ, gyms na klọb egwuregwu ọkachamara. Mpekere ọkwa ọkwa azụmaahịa a bụ nkwalite dị ukwuu na efere na mmanya 1 "ọdịnala. Ọ bụrụ na ị na -achọ ime nzọụkwụ ọzọ na ọzụzụ ịdị arọ gị, ịkwaga na igwe elele Olympic bụ nhọrọ zuru oke.
Ezubere ka ọ dabaa na mgbịrịgba mgbago Olimpik 2 dị mma, efere nkedo a na -adigide ga -enye ọtụtụ afọ nke mbuli elu obi ụtọ.
Ọgbọ nke ndị na -ebuli elu ejirila ihe nha nha nha ọla a wee ruo ebumnuche ha. Efere Ọkwa Metal Standard anyị siri ike, kọmpat, na -adigide maka mmega ahụ gị siri ike. Ọdịdị mara mma, ịdị mfe ijigide, na akara dị elu na-eme ka ha bụrụ mgbakwunye zuru oke na mgbatị mgbatị ọ bụla.
Ma LB & KILO MARKING
Site na nso na ebe dị anya, ị ga -enwe ike ịchọpụta ibu ndị a n'ụzọ dị mfe. Akara ọ bụla nwere akara LB na KG ka ọ dabara na metrik ọ bụla ị na -eji na mmemme ọzụzụ anyị. N'iji ọnụọgụ ndị e buliri elu, nke ejiri agba na -acha ọcha na -emegide ngwụcha matte ojii, ha na -agụpụta nke ọma wee wepụta echiche site n'ịgbakwunye mgbịrịgba gị.
Ụdị efere a bụ ọkacha mmasị n'ọgbọ nke ndị na -ebuli elu maka ihe kpatara ya: ha nwere ntụkwasị obi, profaịlụ ha dị gịrịgịrị maka ịgbakwunye ibu na mmanya gị, ọ na -adịkwa ha mma mgbe ha na -eme ya.
Kedu otu m ga -esi tinye usoro?
Ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị site na email gbasara nkọwa iwu gị, ma ọ bụ ịtụ ahịa n'usoro.
Kedu ka m ga -esi akwụ gị ụgwọ?
Mgbe ikwenyechara PI anyị, anyị ga -arịọ gị ka ị kwụọ ụgwọ. T/T (ụlọ akụ HSBC) na Paypal, Western Union bụ ụzọ anyị na -ejikarị.
Nke gara aga: Meiao Fitness black cast iron kettle mgbịrịgba SET
Osote: Dumbbells nke Rubber Hex
34 sentimita asatọ n'ibuli square ọnyà barbell b ...
Na -akwalite Rubber dị elu nke dị 5Kg dị arọ B ...
Factory N'ogbe Nkedo Iron 5Kg Na 20Kg Barbel ...
1.2M Factory N'ogbe chrome arọ n'ibuli ...
N'ogbe ngwaahịa Rubber ntekwasa na chrome mmanya ...
Inogide roba ntekwasa ibu eweli barbell F ...